के काठमाडौं अब असुरक्षित भएकै हो त ? – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१२ कार्तिक २०७७, बुधबार १७:१७ English
के काठमाडौं अब असुरक्षित भएकै हो त ?
काठमाडौं । कोरोनाको संक्रमणका हिसावले काठमाडौं उपत्यका हट स्पट बनेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले संक्रमण दर १० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुलाई खतराको संकेत भनेको छ तर नेपालमा १२.८२ प्रतिशत पुग्दा पनि सरकारले परीक्षणको दायरा बढाएको छैन ।
नेपालमा पहिलोपटक २०७६ माघ ९ माघ गते नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमित भेटिएका थिए । दोस्रो संक्रमित त्यसको दुई महीनापछि अर्थात् चैत ९ मा भेटिएका थिए । सुरुमा चीनबाट करिब १७८ जना नेपाली ल्याउँदा सरकारले निकै सतर्कता अपनाएको थियो ।
छ महीनापछि अर्थात असोज ९ गते बिहानसम्ममा ६९ हजार ३०१ जना संक्रमित पुगिसकेका छन् । संक्रमितमध्ये ५० हजार ४११ जनालाई कोरोना निको भैसकेको छन् भने ४ सय ५३ जनाको निधन भैसकेको छ ।
उपत्यकामा मात्र कोरोना संक्रमितको संख्या १९ हजार नाघेको छ । बिहीबार थप ७ सय ५५ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या १९ हजार ३ सय ३१ पुगेको हो ।
सबैभन्दा बढी संक्रमित काठमाडौं जिल्लामा देखिएका छन् । बिहीबारसम्म काठमाडौंमा कोरोना संक्रमितको संख्या १५ हजार ७ सय ६२ पुगेको छ । यस्तै, भक्तपुरमा १७ सय ४२ र ललितपुरमा १८ सय २७ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । यसैबीच काठमाडौंमा उपत्यकामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेहरुको संख्या १ सय २२ पुगेको छ ।
बिहीबार मात्रै उपत्यकामा थप ६ जना कोरोनाबाट मृत्यु भएका छन् । काठमाडौंमा कोरोनाको संक्रमणबाट सबैभन्दा धेरै जनाको मृत्यु भएको छ । काठमाडौंमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ८६ पुगेको छ । ललितपुरमा १७ र भक्तपुरमा १९ जनाको कोरोनाको संक्रमणबाट ज्यान गएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमका अनुसार ५० प्रतिशत सक्रिय संक्रमितहरु काठमाडौंमा रहेका छन् । गएको चार दिन यताको मात्र उपत्यकाको कोरोना संक्रमित संख्याको विश्लेषण गर्दा घट्दो छैन संक्रमण फैलिदो देखिन्छ ।
असोज ५ गते सोमबार : उपत्यकाको तीन जिल्लामा काठमाडौं ५ सय ३८, भक्तपुरका ७४ र ललितपुरका ६२ जना संक्रमित गरी ६ सय ७४ जनामा कोरानाको संक्रमण देखिएको थियो ।
असोज ६ गते मंगलबार : उपत्यकामा मात्र ६ सय ४७ जना संक्रमित भेटिएका छन् । काठमाडौंमा ५ सय ११, भक्तपुरमा ६३ र ललितपुरमा ७३ जना संक्रमित देखिएका थिए ।
असोज ७ गते बुधबार : उपत्यकामा ६ सय ३७ जना कोरोना संक्रमितमध्ये काठमाडौंमा ४ सय ९२, भक्तपुरमा ९५ र ललितपुरमा ५० जनामा कोरोना संक्रमित भएका थिए ।
असोज ८ गते बिहीबार : उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा गरी ७ सय ५५ जनामा कोरोनाको संक्रमण भएको थियो । काठमाडौंमा ६ सय ९, भक्तपुरमा ५१ र ललितपुरमा ९५ जना संक्रमित छन् ।
नयाँ अध्ययनले झ्याल–ढोका थुनी एसी चलाएर बस्नु असुरक्षित मानिएको छ । पहिला कोरोना थुकको छिटाबाट सर्छ भनिन्थ्यो, अब छिटाभन्दा पनि साना कण एरोसोलबाट पनि सर्छ भन्ने नयाँ कुरा आएको छ । यो मुखबाट निस्किएको बाफ हो, भेन्टिलेसन नभएको कोठामा केही बेर संक्रमित मानिस बस्यो भने कीटाणुले कोठा भरिन्छ र अरुलाई सर्छ डा. सुशील कोइरालाले केही दिनअघि भनेका थिए । लकडाउन र निशेधाज्ञा खुलेको पनि धेरै दिन भैसकेको छ । सबै गतिविधि पूर्ववत अबस्थामा चल्न थालिसकेका छन् । के काठमाडौं अब असुरक्षित भएकै हो त ?
९ आश्विन २०७७, शुक्रबार ०९:१७ मा प्रकाशित
बडा दशैंको टीकाको आज तेस्रो दिन: आशीर्वाद लिने र टीका लगाउने क्रम जारी	१२ कार्तिक २०७७, बुधबार १०:२९
खोटाङमा जीप दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु	११ कार्तिक २०७७, मंगलवार १७:१०